Tag: usashevedze | Martech Zone
Chitatu, Ndira 26, 2011 Muvhuro, September 28, 2020 Douglas Karr
Patova nenhau shoma pamusoro pechikumbiro cheFTC chemakambani eInternet kugonesa maficha anopa simba vatengi kuti vasateedzwe. Dai iwe usina kuverenga iyo 122-peji peji Ruzivo, iwe waizofunga iyo FTC yaive kumisikidza imwe mhando yemutsara mujecha pane chinhu chavari kukumbira chinonzi Usateedzere. Chii chinonzi Usateedzere? Kune nzira dzinoverengeka dzekuti makambani atarise maitiro evatengi pamhepo. Inonyanya kufarirwa,